Football Khabar » कोपा अमेरिका : ठूला टिमहरूलाई स्वारेजको यस्तो चुनौती !
कोपा अमेरिका : ठूला टिमहरूलाई स्वारेजको यस्तो चुनौती !
उरुग्वेका स्टार फरवार्ड लुइस स्वारेजले कोपा अमेरिकामा आफूहरू पनि उपाधि होडमा रहेको बताएका छन् । प्रतियोगिता आउन ८ दिन बाँकी छँदा उरुग्वेन मिडियासँग कुरा गर्दै उनले यसपटक आफूहरू उपाधि जित्ने होडमा रहेको बताए ।
स्पेनिस बार्सिलोनाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने ३२ वर्षीय फरवार्ड चोटबाट गुज्रिएर हालसालै प्रशिक्षणमा फर्किएका छन् । उनी कोपा खेल्न फिट रहेको बताइएको छ ।
एक अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै स्वारेजले आफू फिट भएको बताए । ‘चोटसँग मेरा तीन हप्ता खास रहे । मैले आफूलाई फ्रेस बनाउन समय पाएँ । अहिले पनि एकदमै ठीक छु,’ स्वारेजले भने, ‘बार्सिलोनाबाट यो सिजन उल्लेख्य हुन सकेन । तर, अब मेरो ध्यान राष्ट्रिय टिममा केन्द्रित छ ।’
त्यसैगरी, स्वारेजले कोपा अमेरिकामा उरुग्वे पनि उपाधि दाबेदार रहने बताए । ‘हामीसँग निकै राम्रा खेलाडी छन् । केही युवा खेलाडी छन्, जो निकै राम्रो लयमा छन्,’ स्वारेजले भने, ‘अब कोही चोटग्रस्त नभए हामीलाई यस प्रतियोगितामा कुनै समस्या छैन ।’
स्वारेजले आफ्नो टिममा युरोपका ठूला क्लबबाट खेल्ने अनुभवी खेलाडी रहेकाले कोपाको दाबेदार रहने बताए । ‘हामीसँग एकसे एक खेलाडी छन् । हामी अर्जेन्टिना र ब्राजिलजस्ता टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौं,’ स्वारेजले भने, ‘हामी ब्राजिलबाट उपाधि लिएर फर्किन चाहन्छौं ।’
उरुग्वेको टिममा स्वारेजसहित हालसालै एथ्लेटिको मड्रिड छाडेका डिएगो गोडिन, पिएसजीका इडिसन काभानी, स्पेनिस जिरोनाका क्रिस्टिएन स्टुआनी, इटालियन युभेन्टसका रोड्रिगो बेन्टाकुर, स्पेनिस सेल्टा भिगोका म्याक्सी गोमेजलगायत स्टार खेलाडीहरू छन् ।
उरुग्वे कोपा अमेरिका सर्वाधिक धेरै १५ पटक जित्ने टिम हो । त्यसपछि अर्जेन्टिनाले १४ पटक र ब्राजिलले ८ पटक जितेको छ । उरुग्वेले यो प्रतियोगिता अन्तिमपटक सन् २०११ मा पराग्वेलाई हराएर जितेको थियो । पछिल्ला दुई सिजन यो प्रतियोगिता चिलीले ब्याक टु ब्याक जितेको थियो ।
कोपामा उरुग्वे समूह ‘सी’मा छ । सो समूहमा जापान, इक्वेडर र साबिक विजेता चिलीसमेत रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १०:२९